Unogona ‘Kuswedera Pedyo naMwari’ Zvechokwadi Here? — RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower
cl chits. 2 pp. 16-25
Jehovha Akazarura Nzira
Kuona “Kunaka kwaJehovha”
“Munhu Uyo Mwanakomana Anenge Ada Kuzarurira”
Nharireyomurindi Yokuzivisa Umambo hwaJehovha—2003
“Swederai Pedyo naMwari”
1, 2. (a) Chii chinganzwika sechisingaiti kuvazhinji, asi Bhaibheri rinotipikira kuti chii? (b) Abrahamu akapiwa ukama hupi hwepedyo, uye nei?
WAIZONZWA sei kudai Musiki wedenga nepasi aizoti nezvako, “Iyi ishamwari yangu”? Kuvazhinji, izvozvo zvinganzwika sezvisingabviri. Pamusoro pazvo, munhuwo zvake angamboita sei ushamwari naJehovha Mwari? Asi, Bhaibheri rinotipikira kuti tinogona kuva pedyo naMwari zvechokwadi.
2 Abrahamu wekare ndomumwe akava pedyo zvakadaro. Jehovha akataura nezvomukuru wekare iyeye achiti “shamwari yangu.” (Isaya 41:8) Hungu, Jehovha aiona Abrahamu seshamwari yake chaiyo. Abrahamu akawana ushamwari hwepedyo ihwohwo nokuti ai“tenda muna Jehovha.” (Jakobho 2:23) Nhasiwo, Jehovha anotsvaka mikana yoku“farira” avo vanomushumira norudo. (Dheuteronomio 10:15) Shoko rake rinokurudzira kuti: “Swederai pedyo naMwari, uye achaswedera pedyo nemi.” (Jakobho 4:8) Mashoko aya anotikoka uye anotipa chivimbiso.
3. Jehovha anotikoka kuti tiite chii, uye chipikirwa chei chakabatanidzwa ipapo?
3 Jehovha anotikoka kuti tiswedere pedyo naye. Akagadzirira uye anoda kutigamuchira kuti tive shamwari dzake. Panguva imwe chete, anopikira kuti kana tikaswedera pedyo naye, naiye achadarowo. Achaswedera pedyo nesu. Nokudaro tingawana chimwe chinhu chinokosha zvechokwadi—‘ushamwari hwapedyo naJehovha.’* (Pisarema 25:14, NW) ‘Ushamwari hwapedyo’ hunobudisa pfungwa yokutaurirana zvakavanzika neshamwari inokosha.
4. Ungarondedzera sei shamwari yepedyo, uye Jehovha anoratidza kuti ishamwari yakadaro munzirai kune vanoswedera pedyo naye?
4 Une shamwari yepedyo yaunogona kuudza zvakavanzika here? Shamwari yakadaro munhu ane hanya newe. Unovimba naye, nokuti akaratidza kuti akavimbika. Mufaro wako unowedzera paunomuudzawo. Kuteerera kwake kwokunzwira urombo kunokurerutsira mutoro unorema wezvinokusuwisa. Kunyange apo kunenge kusina chero mumwe munhu anoratidza seanokunzwisisa, iye anonzwisisa. Saizvozvowo paunoswedera pedyo naMwari, unosvika pakuva neShamwari chaiyo inokukoshesa zvechokwadi, ine hanya newe chaizvo, uye inokunzwisisa zvizere. (Pisarema 103:14; 1 Petro 5:7) Unovimba naye nomwoyo wako wose, nokuti unoziva kuti akavimbika kune vakavimbika kwaari. (Pisarema 18:25) Zvisinei, ropafadzo iyi yokushamwaridzana naMwari tinogona kuiwana nemhaka bedzi yokuti akaita kuti ivepo.
5. Jehovha akaitei chinoita kuti zvibvire kwatiri kuswedera pedyo naye?
5 Tiri toga, isu sevatadzi taisazomboswedera pedyo naMwari. (Pisarema 5:4) “Asi Mwari anoratidza rudo rwake kwatiri pakuti, patakanga tichiri vanhu vanoita zvivi, Kristu akatifira,” akanyora kudaro muapostora Pauro. (VaRoma 5:8) Hungu, Jehovha akaronga kuti Jesu ape “mweya wake kuti uve rudzikinuro mukutsinhana nevakawanda.” (Mateu 20:28) Kutenda kwedu muchibayiro chorudzikinuro ichocho kunoita kuti zvibvire kwatiri kuva pedyo naMwari. Sezvo Mwari “akatanga kutida,” akatipa pokutangira kushamwaridzana naye.—1 Johani 4:19.
6, 7. (a) Tinoziva sei kuti Jehovha haasiri Mwari akavanzika asingagoni kuzivikanwa? (b) Jehovha akazvizivisa munzirai?
6 Jehovha akaita rimwe danho: Akazvizivisa kwatiri. Mukushamwaridzana kwose, kuva pedyo kwacho kunobva pakuziva munhu zvechokwadi, kukoshesa unhu hwake nemaitiro ake. Naizvozvo kudai Jehovha aiva Mwari akavanzika, asingagoni kuzivikanwa, taisazombova pedyo naye. Asi, pane kuzvivanza kwakadaro, anoda kuti timuzive. (Isaya 45:19) Uyezve zvaanozivisa nezvake zvinowanikwa nevanhu vose, kunyange kune avo vedu vangatarisirwa pasi nenyika.—Mateu 11:25.
Jehovha akazvizivisa kwatiri nemabasa ake ezvaakasika uye neShoko rake rakanyorwa
7 Jehovha akazviratidza sei kwatiri? Zvinhu zvake zvaakasika zvinozivisa zvaari—ukuru hwesimba rake, ukuru hwouchenjeri, kuwanda kworudo rwake. (VaRoma 1:20) Asi kuzvizivisa kwaJehovha hakugumiri pazvinhu zvaakasika. Nokugara ari Mukurukuri Mukuru, akanyora mashoko okumuzivisa iye pachake muShoko rake, Bhaibheri.
8. Nei zvichigona kutaurwa kuti Bhaibheri pacharo uchapupu hwokutida kwaJehovha?
8 Bhaibheri pacharo uchapupu hwokutida kwaJehovha. MuShoko rake, anozvizivisa nenzira yatinogona kunzwisisa—uchapupu kwete bedzi hwokuti anotida asi hwokuti anoda kuti timuzive uye timude. Zvatinoverenga mubhuku iri rinokosha zvinotigonesa kuona “kunaka kwaJehovha” uye zvinotiswededza pedyo naye. (Pisarema 90:17) Ngatikurukurei dzimwe nzira dzinofadza idzo Jehovha anozvizivisa nadzo muShoko rake.
9. Ndeipi mimwe mienzaniso yemashoko akananga ari muBhaibheri anotaura nezvaMwari?
9 Magwaro ane mashoko akawanda anonyatsotaura nezvaMwari. Ona mimwe mienzaniso. “Jehovha unoda zvakarurama.” (Pisarema 37:28) Mwari “une simba guru guru.” (Jobho 37:23) “Ndine nyasha, . . . ndizvo zvinotaura Jehovha.” (Jeremia 3:12) “Iye une mwoyo wakangwara.” (Jobho 9:4) Ndi“Mwari uzere nyasha nengoni, unononoka kutsamwa, une tsitsi huru nezvokwadi.” (Eksodho 34:6) “Nokuti imi, Ishe, makanaka, munofarira kukanganwira.” (Pisarema 86:5) Uye, sezvinotaurwa muchitsauko chokutanga, pane chinopfuura zvose: “Mwari rudo.” (1 Johani 4:8) Sezvaunofunga pamusoro pezvakaita Mwari zvinofadza kudai, haunzwi uchiswededzwa here kuna Mwari asingaenzaniswi uyu?
Bhaibheri rinotibatsira kuswedera pedyo naJehovha
10, 11. (a) Kutibatsira kuti tinyatsoona zvaari zvakajeka, Jehovha akabatanidza chii muShoko rake? (b) Muenzanisoi womuBhaibheri unotibatsira kuona mupfungwa simba raMwari richishanda?
10 Pamusoro pokutiudza nezvake, Jehovha norudo akabatanidza muShoko rake mienzaniso yakasimba yokuratidza zvaari muchiito. Nhau dzakadaro dzinopa pfungwa mifananidzo yakajeka inotibatsira kuona zvakasiyana-siyana zvaari zvakajeka zvikuru. Izvozvo zvinozotibatsirawo kuswedera pedyo naye. Ona muenzaniso.
11 Kuverenga kuti Mwari “ane simba guru” kwakasiyana chaizvo nokuverenga pamusoro pemanunuriro ayo akaita vaIsraeri kupfuura nomuGungwa Dzvuku ndokutarisira rudzi rwacho murenje kwemakore 40. (Isaya 40:26) Unogona kuona mupfungwa dzako mvura isina kugadzikana ichiparadzana nepakati. Unogona kufungidzira rudzi rwacho—pamwe chete vari 3 000 000—vachifamba mugungwa rakaoma, mvura yakamira kumativi maviri semasvingo akasimba. (Eksodho 14:21; 15:8) Unogona kuona uchapupu hwokutarisira kwaMwari murenje. Mvura yakadzutuka padombo. Zvokudya, zvakaita semhodzi chena zvaioneka pasi. (Eksodho 16:31; Numeri 20:11) Jehovha pano haangoratidzi chete kuti ane simba asi kuti anorishandisa kubatsira vanhu vake. Hazvinyaradzi here kuziva kuti minyengetero yedu inokwira kuna Mwari ane simba uyo ari “utiziro hwedu nesimba redu, . . . mubatsiri ari pedyo pedyo panguva dzokumanikidzwa”?—Pisarema 46:1.
12. Jehovha anotibatsira sei ‘kumuona’ nenzira yatinogona kunzwisisa?
12 Jehovha uyo ari mudzimu, akatoita zvakawanda kutibatsira kuti timuzive. Sezvo tiri vanhu tinongoona zvinooneka nemaziso chete saka hatigoni kuona zviri munyika yomudzimu. Kuti Mwari azvirondedzere kwatiri nenzira yomudzimu kungaita sokuedza kutsanangurira mumwe munhu akaberekwa ari bofu chimiro chako, zvakadai soruvara rwemaziso ako kana kuti mavara ari paganda rako. Pane kudaro Jehovha anotibatsira ‘kumuona’ nenzira yatinogona kunzwisisa. Dzimwe nguva anoshandisa mifananidzo, achizvifananidza nezvinhu zvatinoziva. Anotozvirondedzera seane nhengo dzomuviri sevanhu.*
13. Isaya 40:11 inoonesa mufananidzoi mupfungwa, uye unoita kuti unzwe sei?
13 Ona nzira iyo Jehovha anorondedzerwa nayo pana Isaya 40:11 panoti: “Uchafudza boka rake somufudzi, uchaunganidza makwayana ake mumaoko ake, nokuatakura pachifuva chake.” Jehovha pano anofananidzwa nomufudzi anotakura makwayana “mumaoko ake.” Izvi zvinoratidza kukwanisa kwaMwari kudzivirira nokutsigira vanhu vake, kunyange avo vasina dziviriro. Tinogona kunzwa takachengeteka mumaoko ake akasimba, nokuti kana takavimbika kwaari, haazombotisiyi. (VaRoma 8:38, 39) Mufudzi Mukuru anotakura makwayana “pachifuva chake”—shoko rinoreva mipendero yokumusoro kwenguo, umo mufudzi pane dzimwe nguva aitakurira gwayana rinenge raberekwa. Nokudaro tine chokwadi chokuti Jehovha anotikoshesa uye anotitarisira nenzira yorudo. Takangoberekwa takadaro kuti tinoda kuva pedyo naye.
14. Nei zvichigona kutaurwa kuti Jehovha anobudisa zvaari zvose nokuna Jesu?
14 MuShoko rake, Jehovha anozviratidza zvizere nokuMwanakomana wake anodiwa, Jesu. Hapana aigona kuratidza mafungiro aMwari nemanzwiro ake zviri pedyo kudaro kana kuti kutsanangura nezvake zvakajeka kupfuura zvakaitwa naJesu. Pamusoro pazvo, Mwanakomana wedangwe iyeye aivapo naBaba vake zvimwe zvisikwa zvomudzimu nezvimwe zvinhu zvose zvinooneka zvisati zvasikwa. (VaKorose 1:15) Jesu akanga ari pedyo zvikuru naJehovha. Ndosaka aigona kuti: “Kuti Mwanakomana ndiani hapana anoziva kunze kwaBaba; uye kuti Baba ndiani, hapana anoziva kunze kwoMwanakomana, uye munhu uyo Mwanakomana anenge ada kuzarurira.” (Ruka 10:22) Paakanga ari pasi pano, Jesu akaratidza zvakaita Baba vake munzira mbiri dzinokosha.
15, 16. Jesu akaratidza zvakaita Baba vake munzirai mbiri?
15 Kutanga, dzidziso dzaJesu dzinotibatsira kuziva Baba vake. Jesu akarondedzera Jehovha nenzira inosvika pamwoyo yedu. Somuenzaniso, pakurondedzera Mwari ane tsitsi anogamuchira vatadzi vanopfidza, Jesu akafananidza Jehovha nababa vanokanganwira avo vanorwadziwa mwoyo zvikuru nokuona mwanakomana wavo anopambadza achidzoka zvokuti vanomhanya vonowira pamutsipa womwanakomana wavo nokumutsvoda zvinyoronyoro. (Ruka 15:11-24) Jesu akataurawo nezvaJehovha saMwari ano“kweva” vanhu vane mwoyo yakarurama nokuti anoda mumwe nomumwe wavo. (Johani 6:44) Anoziva kunyange apo shiri duku inowira pasi. “Musatya,” Jesu akatsanangura, “munokosha kupfuura shiri duku dzakawanda.” (Mateu 10:29, 31) Izvi zvinoita kuti tingonzwa tichikweverwa pedyo naMwari akadaro ane hanya.
16 Chechipiri, muenzaniso waJesu unoratidza zvakaita Jehovha. Jesu akanyatsoratidza zvakaita Baba vake zvokuti aigona kuti: “Aona ini aonawo Baba.” (Johani 14:9) Nokudaro, patinoverenga muEvhangeri pamusoro paJesu—manzwire aakaratidza uye mabatiro ayo akaita nevamwe—tiri kuita setiri kuona mufananidzo mupenyu waBaba vake. Jehovha aisagona kutipa mufananidzo wakajeka kupfuura ipapo wezvaari. Nei?
17. Ipa muenzaniso wezvakaitwa naJehovha kutibatsira kunzwisisa zvaari.
17 Kungopa somuenzaniso: Fungidzira uchiedza kutsanangura kuti mutsa chii. Ungautsanangura nemashoko. Asi ukaratidza mumwe munhu ari kutoita mutsa wobva wati, “Uyo ndiwo muenzaniso womutsa,” shoko rokuti “mutsa” rinowedzera kujeka zvarinoreva uye rinova nyore kunzwisisa. Jehovha akaita izvi kutibatsira kunzwisisa zvaakaita. Pamwe nokuzvirondedzera nemashoko, akapawo muenzaniso mupenyu woMwanakomana wake. Muna Jesu, unhu hwaMwari hunoonekwa huchishanda. Kuburikidza nenhoroondo dzeEvhangeri dzinorondedzera Jesu, Jehovha chaizvo ari kuti, “Izvi ndizvo zvandiri.” Bhuku rakafuridzirwa rinorondedzera sei Jesu paakanga ari pasi pano?
18. Jesu akaratidza sei simba, ruramisiro nouchenjeri?
18 Zvinhu zvina zvikuru paunhu hwaMwari zvakabudiswa zvakanaka kwazvo muna Jesu. Aiva nesimba pazvirwere, nzara, kunyange rufu. Asi, kusiyana nevanhu vane udyire vanoshandisa simba ravo zvisina kufanira, haana kumboshandisa simba rokuita zvishamiso nokuda kwake pachake kana kuti kukuvadza vamwe. (Mateu 4:2-4) Aida ruramisiro. Mwoyo wake wakazadzwa nehasha dzakarurama paakaona vatengesi vaibiridzira vanhu. (Mateu 21:12, 13) Aibata varombo nevakanga vakadzvinyirirwa nokusasarura, achibatsira vakadaro ku“wana zororo” remweya yavo. (Mateu 11:4, 5, 28-30) Pakanga pane uchenjeri husingaenzaniswi mukudzidzisa kwaJesu, uyo ai“pfuura Soromoni.” (Mateu 12:42) Asi Jesu haana kumboshandisa uchenjeri hwake nokushamisira. Mashoko ake aisvika pamwoyo yevanhuwo zvawo, nokuti dzidziso dzake dzakanga dzakajeka, dziri nyore uye dzichishanda.
19, 20. (a) Jesu akanga ari muenzaniso mukuru worudo sei? (b) Sezvatinoverenga nokufungisisa muenzaniso waJesu, tinofanira kuramba tichiyeukei?
19 Jesu akanga ari muenzaniso mukuru worudo. Muushumiri hwake hwose, akaratidza rudo nemarudzi arwo akawanda, kusanganisira tsitsi nokunzwira vamwe. Aisagona kungoona vamwe vachitambura asinganzwi tsitsi. Kunzwira tsitsi ikoko kwaigara kuchimuita kuti aite chimwe chinhu. (Mateu 14:14) Kunyange zvazvo akaporesa vairwara nokupa vaiva nenzara zvokudya, Jesu akaratidza tsitsi neimwe nzira inokosha kupfuura ipapo. Akabatsira vamwe kuziva, kubvuma uye kuda chokwadi pamusoro poUmambo hwaMwari, uhwo huchaunza zvikomborero zvisingagumi kuvanhu. (Mako 6:34; Ruka 4:43) Pamusoro pazvo, Jesu akaratidza rudo rwokuzvibayira nokupa mweya wake nokuda kwevamwe achida.—Johani 15:13.
20 Zvingashamisa here kuti vanhu vemazera ose nemarudzi ose oupenyu vakanzwa vachikweverwa pedyo nomurume uyu wetsiye nyoro nomwoyo chena? (Mako 10:13-16) Zvisinei, sezvatinoverenga nokufungisisa pamusoro pomuenzaniso mupenyu waJesu, ngatirambe tichiyeuka kuti muMwanakomana uyu tiri kuona mufananidzo wakajeka waBaba vake.—VaHebheru 1:3.
21, 22. Chii chinobatanidzwa pakutsvaka Jehovha, uye bhuku rino rinei chingatibatsira pakuita izvi?
21 Nokuzviratidza zvakajeka kudaro muShoko rake, Jehovha anosiya pasina mubvunzo kuti anoda kuti tive pedyo naye. Panguva iyoyowo, haatimanikidzi kuti titsvake ukama hunotenderwa naye. Zviri kwatiri kutsvaka Jehovha “achawanikwa.” (Isaya 55:6) Kutsvaka Jehovha kunosanganisira kusvika pakuziva unhu nenzira dzake sezvinoratidzwa muBhaibheri. Bhuku rino rauri kuverenga izvozvi rakagadzirirwa kukubatsira kuita izvi.
22 Uchaona kuti bhuku rino rakakamurwa kuita zvikamu zvinoenderana nezvinhu zvina zvikuru zviri muunhu hwaJehovha: simba, ruramisiro, uchenjeri, uye rudo. Chikamu chimwe nechimwe chinotanga nokutaura muchidimbu pamusoro pechimwe chezvaari. Zvitsauko zvishomanana zvinotevera zvinotaura pamusoro pokuti Jehovha anoratidza sei zvaari izvozvo munzira dzakasiyana-siyana. Chikamu chimwe nechimwe chinewo chitsauko chinoratidza kuti Jesu akaratidza sei muenzaniso wounhu hwacho, uye chimwe chitsauko chinoongorora kuti tingazviita sei muupenyu hwedu.
23, 24. (a) Tsanangura chimwe chikamu chinokosha chinoti “Mibvunzo Yokufungisisa.” (b) Kufungisisa kunotibatsira sei kuramba tichiswedera pedyo naMwari?
23 Kutanga nechitsauko chino, pane chikamu chinokosha chine musoro unoti “Mibvunzo Yokufungisisa.” Somuenzaniso, tarira bhokisi riri papeji 24. Magwaro nemibvunzo yacho hazvina kuitirwa kudzokorora chitsauko chacho. Asi, chinangwa chazvo ndechokukubatsira kufungisisa zvimwe zvinokosha pamusoro penyaya yacho. Ungashandisa sei chikamu ichi zvinobudirira? Tarisa rugwaro rumwe norumwe ruripo woverenga ndima dzacho nokungwarira. Kana zvadaro wotarira mubvunzo unotevedzana norugwaro rumwe norumwe. Fungisisa mhinduro dzacho. Unogona kutsvakurudza mamwe mashoko. Zvibvunze mimwe mibvunzo yokuwedzera: ‘Mashoko aya anondiudzei nezvaJehovha? Izvi zvinoshanda sei muupenyu hwangu? Ndingazvishandisa sei kubatsira vamwe?’
24 Kufungisisa kwakadaro kunogona kutibatsira kuramba tichiswedera pedyo naJehovha. Nei? Bhaibheri rinobatanidza kufungisisa nomwoyo. (Pisarema 19:14) Patinofungisisa nokuonga pamusoro pezvatinodzidza nezvaMwari, mashoko acho anopinda mumwoyo wedu wokufananidzira, umo anochinja mafungiro edu, anoita kuti tinzwe neimwe nzira, uye pakupedzisira anoita kuti tiite chimwe chinhu. Kuda kwedu Mwari kunokura, uye rudo irworwo runozoita kuti tide kumufadza seShamwari yedu yepamwoyo. (1 Johani 5:3) Kuti tisvike pakuva noukama hwakadaro, tinofanira kusvika pakuziva unhu hwaJe hovha nenzira dzake. Zvisinei, kutanga, ngatikurukurei zvakaita Mwari zvinotiita kuti tiswedere pedyo naye—utsvene hwake.
Sezvineiwo, shoko rechiHebheru rinoshandurwa kuti ‘ushamwari hwapedyo’ rinoshandiswa pana Amosi 3:7, iyo inoti Changamire Ishe Jehovha anozivisa “zvakavanzika” zvake kuvashumiri vake, achiita kuti vazive pachine nguva zvinangwa zvake zvaachaita.
Somuenzaniso, Bhaibheri rinotaura nezvechiso chaMwari, maziso, nzeve, mhino, muromo, maoko, netsoka. (Pisarema 18:15; 27:8; 44:3; Isaya 60:13; Mateu 4:4; 1 Petro 3:12) Mashoko okufananidzira akadaro haafaniri kungotorwa sezvaari, kungofananawo neanotaura nezvaJehovha se“dombo” kana kuti “nhoo.”—Dheuteronomio 32:4; Pisarema 84:11.
Pisarema 15:1-5 Jehovha anotarisirei kune vanoda kuva shamwari dzake?
Pisarema 34:1-18 Jehovha ari pedyo navanaani, uye vakadaro vanogona kuva nechivimbo chei maari?
Pisarema 145:18-21 Ibasa rei ratingaita richatiswededza pedyo naJehovha?
2 VaKorinde 6:14–7:1 Mufambiroi unokosha kana tichizochengeta ukama hwepedyo naJehovha?